अपरिचित रुप, अपरिमेय डर – KathaHamro
“तिम्रो जस्तो मुटु मेरो पनि……नबोलाउ मलाई निठुरी भनि……”, पृष्ठभुमिमा स्वर सम्राट नारायण गोपालले आफ्नो स्वरको जादुले गीतमा समेटिएका हरेक शब्दलाई इन्साफ दिँदै थिए भने म चाहिँ ति शब्दहरुमा रमाउँदै लेसन प्लानिङ्लाइ इन्साफ् दिने प्रयासमा तल्लिन थिए।
कपासझैं मुलायम आफ्नै दुनियामा रमाउने ति बादलहरु त्यो दिन खै कोसँग रुष्ठ थिए। काला र निला हुँदै रुन्चे अनुहार बनाउँदै हरिया डाँडासँग सहयोगको अपेक्षा गर्दै थिए। तिनिहरुको भलाकुसारि धेरै बेर नै चल्यो। डाँडाले पनि त्यो दिन ति बादललै आफुसँगै बस्ने निम्तो दिएछन् कि खै बादल त्यहाँबाट हटेनन्। बेलुका पखको त्यो सिरेटोले अनुहारभरि छरपस्ट पारिदिएको कपाल र भुइँभरि खलबल पारिदिएका कापिका पानालाइ समेट्दै गर्दा घडिले सवा सात भएको सन्केत गर्यो। सोचेँ आजलाइ यति नै। बरन्डासँगको दुइ घन्टाको साथ पछि कापि किताबको सानो चाङ् बनाएर कोठामा छिर्ने मेसो मेलो गर्दा नगर्दै एउटा अन्जान आवाजले मेरो होस उडाइदियो। “नानि घरमा एक्लै हौ?”, नौलो अनुहार, न कहिल्यै देखेको न त भेटेको। अनुहारमा फिँजारिएका रेखाहरु देख्दा लाग्यो अर्ध शताब्दि पार गरेर रमाइरहेको वा किशोरावस्थाका दिन् सम्झेर बुढेस्काल लाग्दाको दुखमा छट्पटाइरहेको पुरुष चरित्र हुनुपर्छ।
जति भयानक प्रश्नलाई पनि सजिलै हल गरेर परिक्षा कोठाबाट निस्कने मलाइ त्यो प्रश्नले पहाडझैँ थिच्यो। अन्जान मुखबाट निस्किएको प्रश्न भएर पनि होला। हुन त बोर्ड् परिक्षामा प्रश्नपत्र निकाल्ने शिक्षक नि सबै परिचित् कहाँ हुन्थे र? मुटु पृथ्वि हाइवेमा ड्राइवर्ले कुदाएको हाइसझैँ हाँकिन थाल्यो। “पावरलेसनेस्”: स्वस्तिका दिदिले इन्स्टिटिउट्मा कयौँ पटक उच्चारण गरेको शब्दको अर्थ त्यो दिन सिँडिमा मलाइ घोरिएर हेर्दै प्रश्न गरेको व्यक्तिलाइ देख्दा मैले महसुस् गरेँ। उत्तरमा के भनुँ? मुतुको रफ्तारलाई उछिन्दै मस्तिस्कको रफ्तारले जित हासिल गर्यो। त्यो दिन थहा भयो हाम्रो मस्तिस्क कति रफ्तारमा चल्छ भनेर। केहि सेकेन्डको अवधिमै सयौँ विचारहरुको ओहिरो लाग्यो। महेन्द्रपुलको भिडलाई छिचोल्दै ५०% सेल् लागेको दोकानमा आतिँदै पुगेको ब्यक्तिझैँ एउटा विचारले मस्तिस्क हुँदै मुखसम्म बाटो बनायो। फ्याट्ट जवाफ आयो- “कहाँ एक्लै हुनु, हुनुहुन्छ नि अरुपनि। केहि काम थियो र? भोलि औनुहोस् न। बा आमा आउन अलि ढिला होला जस्तो छ।”
धान बारिको बिच्चमा घर अनि एक्लि म। आमा र बा कुन चाहिँ आफन्त बिरामि परेर उतै बस्ने गरि जानुभएको थियो र सहकर्मि साथि भने राजधानि। मेरो उत्तर पस्चात त्यो व्यक्ति चारै तिर आँखा डुलाउँदै मुस्कुराउँदै सिँडिबाट ओर्लि तगारो तर्फ लाग्यो। सुर्यले पनि त्यतिन्जेलसम्म बिधाइ मागेर डाँडा पारि गैसकेको थियो। मेरो मुटुमा सिर्जिएको भयावय अवस्थाको जनकारि र मस्तिस्कमा उब्जिएका परिकल्पना को भेउ मात्र मलाइ थियो र म छु यहाँ भन्दै मै तिर ढल्किएर म बस्ने धन्सारलाइ घेरिरहेका धानलाई।
मन र मस्तिस्कको रफ्तार सङ्सगैँ हातको रफ्तारलै पनि बदाउँदै कापिको चाङ्लाइ उठाउँदै कोठा भित्र पसेँ। ढोका र झ्याल बन्द गरेर तिनको निरिक्षण गरिसकेपछि ढोका छेउमा आएर बसेँ। जेको डर थियो त्यहि भयो। मोबाइल खोलेर हेर्छु मेरो होस् जस्तै तेस्को तावर पनि उडेको रैछ। हुनत बरनडामा त नतिप्ने तावर कोठा भित्र, म पनि सपना देख्दै थिएँ | ग्यालेरि खोलेर भएभरका पावर र मोटिभेसन्का कोट्स् पढ्न थालेँ | तर आँखाले जति नै कोट्स पढे पनि मस्तिस्कमा सावधान इन्डिआ का कथा र बिधार्थिहरुले “मिस, हजुर बस्ने घर मा त डरलाग्दो घटनाहरु भाछ” भन्ने कुराहरु घुम्न थाले। आँखाले मोबाइलको स्क्रीन् बाहेक केहि हेर्न खोजेन। लेखेर पठाएका एउटा मेसेज् देलिभर भएनन्। ढोकामा बसेर मोबाइल हेर्दा हेर्दा डेढ घन्टा भयो। आँखा पोल्न थाले। घाँटी मरभुमिझैँ सुक्खा भयो। तर ज्यानले पानी ल्याउने त के ढोका खोल्ने सम्म पनि आँट गरेन। मुटु ज्वालामुखिझैँ पोलिरहेको थियो। त्यहि छट्पटिमा अर्को आधि घन्टा पनि बितेछ। केहि बेर पछि आँगनमा सर्याक् सुरुक् गरेको अवाजले मेरो शरिरको तापक्रम् बढाइदियो। लाग्यो रगत उम्लेर नसा राफमा जलिरहेछन्। बाच्नु छ भने एक मिनेटमा जे गर्छस् गर् आफुलाइ बचाउन भनेझैँ मैले भकारि पछाडि भएको गोर्खालिले दुश्मन्को घाँटि छिनाले पछि नपखालि राखेर खिया लागेको खुकुरि जस्तै खुकुरि झिकेर हातमा समाए। अनि बिस्तारै गएर बत्ति निबाएर खाटमा पल्टिएँ।
आँगनबाट सिँडीतर्फ आउदै गरेको आवाज बरन्डा निर आएर रोकोइएको आवस भयो मलाइ। लामो श्वास फेरेर आफुलाई होसमा ल्याउने प्रयास गरे। सपना भैदियोस् भनेर प्रार्थना पनि गरेँ। तर त्यो नितान्त बिपना नै थियो। मेरै ढोका अगाडि आएर रोकिएका ति पाइला ले खै कस्तो कदम अघि सार्ने सोचमा थिए। शरिरमा बढेको त्यो तापक्रमले मेरा भावहरुलाइ पगालिदिए र आँखाबाट खोला बनेर कानको बाटो गर्दै घाटि बनेर सिरानीमा मिसिन गए मेरा भावहरु। एउटा हातमा खुकुरी र अर्को हातमा मोबाइल। आँसु पुछ्नलाइ कुनै हात बेरोजगार थिएनन् त्यो रात। बादलले जति रुष्ठ भएनि त्यो दिन किन आँसु झारेन भनेको त त्यो दिन रुने पालो मेरो थियो। ढोकामा आएको हल्का धक्काले मलाइ गेट् सेट् को पोजिसनमा बस्न आहवान् गर्यो। लामो शास फेरी खुकुरीलाइ कस्सिएर समाए अनि जुरुक्क उठेर सिदा बसेँ। लाग्यो गोर्खाली कै सन्तती हुँ आइलागे जे पनि गर्न सक्छु। तर त्यसपछि निकै बेरसम्म कुनै अवाज आएन। मन दरो पारेर खाटमा के पल्तिएको मात्र थिए पाइला अघि बढेर अर्को कोठा भएसम्म पुगि फर्किए। तर मेरो होस भने त्यो रात भर फर्किएन। हातमा खुकुरी लिएर काठको सिलिङ् तिर हेर्दै मन र मस्तिस्कमा हजारौँ कुरा खेलाउँदै बिहानको घामको झुल्कोको पर्खाइमा बसिरहे।
घडिले ५ बजेको सन्केत गर्न नपाउँदै र आमा बा को आवाज सुन्न नपाउँदै म जर्याक् जुरुक् उठेँ। हातबाट खुकुरी के तल राख्न लागेको थिएँ औलाहरु त कुँजिएझैँ भए। औँला का हरेक कोस दुखाइमा तड्पिरहेका थिए। तर पनि खुकुरी भुइँमा फालेर बाहिर निस्किएँ। नयाँ दिन अनि नयाँ जिवन। नयाँ हिम्मत अनि नयाँ सिकाइ। डरलाइ जितेर त्यो दिन म त्यो कोठाबाट बाहिर निस्किए। आमा बा लाइ आखाँ अगाडि देख्दा भक्कानो फुट्ने गरी रुन पनि मन लाग्यो तर आँसु त राती नै सकिएछन्। त्यसैले मुसुक्क हाँसिदिएँ अनि ठिक छ भनि जवाफ दिएँ के छ मिसको प्रश्नमा।
बादल पनि सान्त भएर डाँडासँग बिदाइ मागेर गैइसकेछन् र म पनि शैक्षिक असमानता हटाउने लडाइमा खुकुरी हैन कलम लिइ त्यस दिनको तयारीमा जुटेँ।
घर फिर्ती – यात्रा क्रमशः	उसले लक्ष्मण रेखा टेक्यो
Total Visits: 14726